Wasiirka Maaliyada oo booqasho ku tagay Degmada H/wadaag +Sawirro « AYAAMO TV
Wasiirka Maaliyada oo booqasho ku tagay Degmada H/wadaag +Sawirro
746 Views Date March 1st, 2014 time 12:28 pm
Xuseen Cadi Xalane, wasiirka maaliyada xukuumada Soomaaliya, ayaa maanta waxa uu booqasho ku tegay xarunta degmada Howl-wadaag ee gobalka Banaadir, kadib markii dhawaan xukuumada Soomaaliya ay wasiirada u qeybisay degmooyinka si ay amaanka caasimada uga shaqeeyaan.
Wasiirka ayaa waxa uu xarunta degmada kula kulmay, maamulka degmada, bulshada qeybaheeda kala duwan, gudiga amaanka iyo abaabulka, waxaana kulanka kadib saxaafada si wada jir ah ula hadlay gudoomiyaha degmada Howl-wadaag Maxamed Abuukar Cali (Jacfar) iyo wasiirka oo faahfaahiyay wixii kasoo baxay kulankooda.
Gudoomiyaha degmada Howl-wadaag Maxamed Abuukar Cali (Jacfar) ayaa waxa uu ugu horeyn sheegay in uu aad u soo dhaweynayo qaabka xukuumada Soomaaliya ay wasiirada ugu dirtay degmooyinka si ay amaanka wax uga qabtaan, waxa uuna intaa raaciyay in ay lama huraan tahay in amaanka sara loo qaado.
Jacfar ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in kulankoodii maanta uu ahaa mid gogol xaar ah oo looga tashanayay wada shaqeyna mustaqbalka Dhaw iyo kan fog intaba.
Wasiirka Maaliyada Xuseen Cadi Xalane,oo ka hadlay madasha kulanka ayaa balan qaaday in shirka golaha wasiirada uu ka sheegi doono horumarka degmadu ay sameyso, waxa uuna si kaftan ah u sheegay in markii loo sheegay in degmada Howl-wadaag uu ku qoranyahay uu farxay maadaama aysan aheyn degma hada howsheeda laga bilaabayo meel eber ah oo maamulka hada ka jiraahi uu horay howla muhiim ah oo amaanka khuseeya uu uga qabtay.
Dhawaan ayaa golala wasiirada Soomaaliyeed waxa ay wasiirada u qeybiyeen degmooyinka si ay ula shaqeeyaan gudiga amaanka iyo guud ahaan maamulka si meesha looga saaro falalka amniga ka dhanka ah ee mudooyinkan kusoo kordhay Muqdisho
. Xafiiska Shabakada Allbanaadir.com